Su'aal: mar mar waxaa igu kaca xasaasiyad?
Author Topic: Su'aal: mar mar waxaa igu kaca xasaasiyad? (Read 1978 times)
« on: September 19, 2015, 11:21:17 AM »
Bacda salaan mar mar waxaa igu kaca xasaasiyad kuna eg dhudhumaha lugaha (jilbaha laga bilaabo ilaa anqawyada laga gaaro) waan xoqi way guduudan way madoobaan waa cuncun iyo xanuun isku jira. Marmarna wuu iska tagaa. Marna waa soo laabtaa. Maxaa sababi karo ayaa la dhihi karaa? Shukran.
Re: Su'aal: mar mar waxaa igu kaca xasaasiyad?
« Reply #1 on: September 19, 2015, 09:25:40 PM »
walal waxad u bahantahay inaad baadhid waxyabaha kugu kiciya xasaasiyada adigoo marka ay kugu kacdo dib ufirinaya cuntooyinkii aad cuntahay maalmahii u dambeeyey sid akalulnka , beedka , digaga , hilibka idaha , inkastoo dadku ku kala duwanyihiin waxyabaha ku kiciyana hadana cuntoyinkasa uGu badan ,
maxaad se ku garatay inuu waxan xasaasiyad yahay ?
« Reply #2 on: September 22, 2015, 01:14:43 PM »
Waxaa dhici karta in xasaasiyad kaliya ay tahay oo aad wax dhibsatay, waxaa dhici karto in xanuun maqaar uu yahay oo loo yaqaano Eczema oo badanaa u badan meesha aad ka cabanayso.
Fadlan la xiriir dhakhtar si loo fiiriyo meesha aad ka cabanaysid.
Views: 10929 December 04, 2016, 10:32:07 PM
Views: 7621 July 05, 2017, 01:34:23 PM
Views: 8986 February 28, 2016, 01:40:51 PM
Views: 52247 December 05, 2015, 11:34:53 AM
Views: 9153 November 01, 2011, 07:58:14 PM